देउवाले तोड्लान् एमालेको तगारो ?
निशान न्युज जेष्ठ २०, 2074
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा पुन: मतदान गर्ने निर्णय गरेसँगै भोली हुने भनिएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन धरमरमा परेको छ ।
भरतपुरमा मतगणना हुनुपर्ने माग राख्दै संसद अवरुद्ध पार्दै आएको एमालेले आयोगको निर्णय अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।एमालेले भोली पनि संसद अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेको छ । एमालेले संसद अवरुद्ध गरे प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन पर धकेलिने निश्चित बन्दै गएको छ ।
बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने प्रावधान अनुसार भोली ११ बजे प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुँदैछ । वर्तमान गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध एमालेले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको भए पनि निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि एमाले प्रधानमन्त्री निर्वाचनबाट पछि हटेको छ ।
भोली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने पत्र पढेपछि मतदान प्रक्रिया अघि बढ्ने संसद सचिवालयको तयारी थियो । तर, निर्वाचन आयोगले भरतपुर महानगरपालिकाको १९ नम्बर वडामा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेकाले एमालेले संसदमा अवरोध गर्ने संसदीय दलका नेता भानुभक्त ढकालले बताए ।
एमालेले संसद अवरुद्ध गर्ने पक्कापक्की भएसँगै देउवा तत्काल प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना टरेको छ । देउवा प्रधानमन्त्री बन्न एमालेले संसद खोल्नुपर्ने हुन्छ । तर, एमाले निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि असन्तुष्ट बनेकाले देउवालाई एमालेको तगारो हटाउन फलामको च्यूरा चपाउनु सरह हुने जानकारहरुको भनाई छ ।
पौडेलले बोलाए आफु पक्षिय केन्द्रिय सदस्यको बैठक
काठमाडौं । महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा नेपाली कांग्रेसभित्र नेताहरूले आफ्ना पक्षका भेला तथा छलफलको क...
विपक्षी गठबन्धनले भन्यो, ओलीले गर्दा राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलियो (संयुक्त विज्ञप्तीसहित)
काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनले राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष कार्यसम्पादन नग...
माओवादीको आकस्मिक बैठकले गर्‍यो दल बदल गरेकाहरुलाई कारबाही
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले दल बदल गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र केन्द्रीय सदस्यहरुलाई ...
बूढानीलकण्ठमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा के–के भयो छलफल ?
काठमाडौं । आगामी रणनीतिबारे छलफल गर्न बसेको विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठक सकिएको छ । काँ...
राप्रपाले बनायो २५ सदस्यीय केन्द्रीय विशेष समिति, अटेनन् धवलसमशेर राणा
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले २५ सदस्यीय केन्द्रीय विशेष समिति गठन गरेको छ...
विपक्षी गठबन्धनलाई बलियो बनाउँदै निरन्तरता दिने कांग्रेसको निष्कर्ष
काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विपक्षी गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।...